Isbeddellada Naqshadeynta Websaydhka ee 2016 ee La Tixgelinayo Kahor Abuuritaanka Goobtaada | Martech Zone
Isbeddellada Naqshadeynta Websaydhka ee 2016 ee La Tixgelinayo Kahor Abuuritaanka Goobtaada
Talaado, Janaayo 12, 2016 Talaado, Janaayo 12, 2016 Pamela Webber
Waxaan aragnay shirkado badan oo u dhaqaaqaya nadiif, khibrad fudud oo loogu talagalay dadka isticmaala bogagga. Haddii aad tahay naqshadeeye, horumariye, ama aad jeceshahay boggaga internetka, waxaad wax ku baran kartaa adoo fiirinaya sida ay u sameynayaan. Diyaar u noqo in laguu waxyoodo!
Ka tagida horaantii, maalmihii xiisaha badnaa ee shabakada, oo ay la socdeen gifs biligleynaya, baararka firfircoon, badhamada, astaamaha iyo dhaantada qoob-ka-ciyaarka, animation-ka maanta waxaa loola jeedaa abuurista is-dhexgal, ficil celin jawaab celin ah oo kor u qaada sheekada isla markaana siisa khibrad adeegsade hodan ah
Tusaalooyinka animation-ka hodanka ah waxaa ka mid ah animations loading, navigation iyo menus, animations hover, galleries iyo slideshows, animation motion, rolling, iyo background animations and videos. Kafiiri boggan Beagle, oo ah maareynta soo-jeedinta:
Animation hodan ah ayaa sidoo kale lagu arki karaa dhexgalka micro. Tusaale ahaan, barta 'LinkedIn', isticmaale ayaa dul wareegi kara kaar loogu talagalay menu-ga soo-baxa ah ee ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaarrada ah, ka dibna wuxuu dooranayaa inuu ka boodo sheekada ama uu qaado tallaabooyin kale.
Animations GIF leeyihiin (farxad?) Soo cusboonaadeen, oo waxaa loo isticmaali karaa ujeedooyin badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan majaajilada, banaanbaxyada, iyo xitaa kaliya qurxinta.
Waxyaabaha Design, Luuqad naqshadaysan oo ay soosaartay Google, waxay ku tiirsan tahay walxaha naqshadeynta daabacaadda ku saleysan - qaab qorista, shebekadaha, meelaha, cabirka, midabka, iyo adeegsiga sawirada — oo ay weheliyaan dhaqdhaqaaqyo jawaabo iyo kala guur ah, suuxdin, iyo saameyn qoto dheer sida iftiinka iyo hooska bixiyaan khibrad macquul ah, soo jiidasho leh, iyo is-dhexgal isticmaale.
Naqshadeynta Maaddadu waxay isticmaashaa hooska, dhaqdhaqaaqa, iyo qoto dheer si ay u bixiso bilic nadiif ah oo casri ah oo diiradda saareysa hagaajinta UX iyada oo aan la helin dawanno iyo foori fara badan.
Tusaalooyinka kale ee naqshadeynta maaddada waxaa ka mid ah sawirro gees ilaa gees ah, qaab qoris ballaaran, iyo meel cad oo ula kac ah.
In kasta oo Naqshadeynta Maaddadu ay bixiso hal qaab oo loogu talagalay fikradda ugu yar, haddana qaabeynta guryaha ayaa ah xulashada caadiga ah ee loogu talagalay dadka jecel khadadka nadiifka ah. Taasi waa, naqshadeynta guryaha waxaa badanaa loo arkaa inay tahay muuqaal macquul ah, dhab ah, oo raaxo leh.
Iyada oo ku saleysan mabaadi'da booska cad, geesaha la qeexay, midabada firfircoon, iyo sawirada 2D - ama "fidsan", qaabeynta qaabeynta waxay bixisaa qaab nooc ah oo si isdaba joog ah u adeegsada farsamooyinka sida astaanta sawirada iyo hooska dhaadheer.
Kala Qaybso Shaashadaha
Sida ugu wanaagsan ee loo isticmaalo marka aad haysato laba meelood oo isku mid ah oo muhiim ah oo lagu dhiirrigeliyo, ama aad rabto inaad ku siiso waxyaabo ay ka mid yihiin sawirro ama warbaahin, shaashadaha kala-baxa ayaa ah hab cusub oo cusub oo lagu bixiyo waayo-aragnimo isticmaale xiiso leh oo geesinimo leh.
Adoo u oggolaanaya adeegsadayaasha inay doortaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo khibradooda, waxaad abuuri kartaa khibrad nooca-marin ah oo soo jiidanaysa booqdayaasha inay galaan.
Ka daadinta Chrome-ka
Marka lagu daro bumbuyuutarrada 'chrome bumpers' iyo qurxinta baabuurta caadiga ah, '' chrome '' waxaa loola jeedaa weel websaydh ah - menus, headers, footers, and border - that encaps the core content.
Tani waxay noqon kartaa mashquul, oo shirkado badan ayaa dooranaya inay ka soo baxaan kontaynarrada oo ay abuuraan qaabab nadiif ah, gees ilaa gees ah oo aan lahayn xuduud, madax, iyo lugo.
Iska ilow laabta
“Xagga laabka” waxaa ku qoran jargon wargeys qeybta sare ee bogga hore ee wargeys. Maaddaama wargeysyada badanaa la laalaabo oo lagu rido sanduuqyo iyo bandhigyo, waxyaabaha ugu badan ee soo jiidashada leh ayaa ka sarreeya laabta si loo siiyo fursadda ugu wanaagsan ee ay kula wareegaan akhristaha suurtagalka ah (iyo boorsadooda).
Naqshadaynta websaydhku muddo dheer ayay u adeegsanaysay fikradda laab ka soo baxa mabda'a ah in rogroggu ahaa mid culus. Laakiin dhawaanahan, sawirrada iyo shaashadda shaashadda buuxda ayaa salaamaya isticmaale waxayna ku dhiirrigelinayaan rogrogmada inay soo bandhigaan waxyaabo dheeraad ah oo qoto dheer.
Fiidiyow Shaashad-buuxa ah
Fiidiyowgu wuxuu noqon karaa hab fiican oo lagu soo jiito dareenka booqdayaasha, waana mid xitaa ka waxtar badan muuqaalka ama qoraalka. Daalacashada fiidiyowyada sida kuwa ay Apple u isticmaasho Apple Watch waa hab gaar ah oo loo dejiyo cod isla markaana lagu soo jiito dadka soo booqanaya.
Guji si aad u aragto HighbridgeFiidyowga gurigooda
Marka ay timaado naqshadeynta websaydhka, qaybo badan oo gaar ah ayaa lagu xallin doonaa warshadahaaga, niche, suuqa bartilmaameedka, iyo waxyaabaha ku jira. Qaab-dhismeedkaagu wuxuu ku xirnaan doonaa waxa booqdayaashu ka jawaabaan iyo waxa macnaha ugu badan ka dhigaya farriintaada. Laakiin isbeddelladaan gacanta ku haya, waxaad heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u abuurto degel ku qanciya oo sameeya wixii aad ugu baahan tahay inuu ku sameeyo, taasina waxay muujineysaa inaad taqaanno sida loola jaanqaado xilliyada.
Pamela Webber waa Madaxa Suuqgeynta ee 99designs, suuqa ugu weyn aduunka ee qaabeynta sawirada. At 99designs, Pamela waxay madax ka tahay kooxda suuqgeynta caalamiga ah ee mas'uulka ka ah wadista helitaanka macaamiisha iyo kordhinta qiimaha nolosha macaamiisha. Marka laga soo tago waayo-aragnimadeeda suuq-geynta, Pamela waxay keeneysaa marti-gelin waayo-aragnimo gacanta-koowaad ah oo ah ganacsade ganacsi iyo la shaqeynta bilowga xawaaraha koraya.
6 Su’aalood oo Aad Isweydiiso Intaadan Bilaabin Naqshadeynta Websaydhkaaga
4 Siyaabood oo Codsiyada Macluumaadka Weyn ay u Bixinayaan Natiijooyin